दिल्लीमा देउवा, चीनबाट भरातलाई यस्तो ‘साइको’, तुहियो ‘वान टु वान’ वार्ता, दोक्लाम विवादमा नेपाली ‘तटस्थता’ भारतले गर्यो अस्वीकार
दिल्लीको अर्काे घट्ट देउवाको घाँटीमा– दोक्लाम विवादमा नेपाल भारतकै पक्षमा उभिने नि नउभिने ?
| 2017-08-24 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको राजकीयय भ्रमणमा रहेकै बेला चीन र भारतीय पत्रिकाहरुमा भारत र चीन बिचमो मनोविज्ञान कडा रुपमा प्रकट भएको देखिएको छ ।
विशेष गरी चीन भारत दोक्लाम भूमिलाई लिएर तातिरहेका बेला भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ‘कथित तटस्थता’को नीति मन नपरेको स्पष्ट शब्दमा राखिदिएका छन् ।
भारत के चाहन्छ भन्ने यसैबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।
तर नेपाललाई भने भारतले इसारामा चल्ने यन्त्र बनाउने कठोर आग्रहको जवाफ प्रम देउवाले मुख फोरेर दिन नसकेपछि दुई समकक्षी बिचको वान टु वान वार्ता समेत हुनै सकेन ।
भारतले वान टु वान वार्ता, जुन कार्यतालिकामै समावेश थियो, प्राथमिकता नदिनुले दोक्लामबारे नेपाल भारतकै पक्षमा उभिन दबाबमूलक साइको दिएको विज्ञहरु बिच चर्चा चलिरहेको छ ।
दिल्ली र बेइजिङलाई फरक खाले ज्वरो आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमणमा रहँदा यस अघि बेइजिङले यस तहबाट दिल्लीमा जबरजस्त चर्चा चुलिदैनथ्यो । तर यस पटक चीन फ्याक्टरको बारेमा चर्चा फरक रुपले भएको छ ।
भारतीय बुद्धिजिवी, मिडिया तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको बीचमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीन फ्याक्टरको घुसेको छ ।
किन भएन वान टु वान वार्ता ?
अगाडि नै तालिकामा चढिसकेको दुई समकक्षी बिचको ‘वान टु वान’ भेट वार्ता आजको घटनाक्रमलाई हेर्दा तुहिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीबीच पूर्वनिर्धारित ‘वान टु वान’ वार्ता हुन नसक्नुलाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् ।
बिहीबारका लागि तय भएको यो वार्ता हुन नसक्नु, तर तालिकामै नपेको आकस्मिक भेट गर्न मोदी आफै आउनुले भारतले वान टु वान वार्ताका लागि दोक्लाम नीतिबारे नेपालको पक्ष चाहेको सन्देश हिजै मोदीले खोजेका थिए भन्ने बहस बाहिर आएको छ ।
यो ‘बार्गेनिङ’ मोदीले गरेका थिए ।
जबकि, त्यसका लागि देउवा दिल्ली पुगेको केही घण्टामै ‘वार्म अप’ भेट गरिएको थियो ।
यसरी टर्यो वान टु वान वार्ता आजका लागि
मोदीसँगको भेटका लागि देउवा नेपाली समय अनुसार पौने १२ बजे हैदरावाद हाउस पुगेका पनि थिए । भ्रमण तालिकाअनुसार त्यसपछिका ३० मिनट नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै वार्ता हुनु पर्ने थियो ।
तर, भेट फरक रुपले अघि बढ्यो ।
उक्त भेटमा नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र राजदूत दीपकुमार उपाध्याय सहभागी भए भने भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी पनि उपस्थित थिए ।
उक्त भेटपछि देउवा र मोदीको उपस्थितिमा द्विपक्षीय वार्ता भयो ।
लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन भयो, जहाँ आठ समझदारीमा हस्ताक्षर हुनुका साथै देउवा र मोदीले सम्बोधन गरे । तर, राजकीय भ्रमणको तालिकाअनुसार एक्लाएक्लै संवाद भने हुनै सकेन ।
कूटनीतिक नियमको सामान्य चलन अनुसार राजकीय भ्रमणको कार्यतालिका तलमाथि हुने गर्दैन । अघिल्लो दिनमै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली समकक्षी देउवालाई सरप्राइज दिँदै ‘वार्मअप’ भेट गर्नु तर पूर्वनिर्धारित वार्ता नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको विज्ञ बताउँछन् ।
चीन किन तातेको ?
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले बेइजिङलाई पनि छोएका देखिन्छ । उसले पनि यो भ्रमणलाई निकै नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
उसको प्रतिक्रियाका कारण भारतमा फरक चर्चा चलेको हो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालय तथा चीनको सरकार निकट रहेका सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालका प्रमको भारत भ्रमणबारे धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, टाइम्स अफ इन्डिया लगायतका सञ्चारमाध्यमहरुलाई पनि चीनले छोएको स्पष्टै देखिएका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाले ‘नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा, चीन चिन्तामा’ भन्ने हेडलाइन प्रकाशित गरेको छ ।
यता चीनको संस्थापन पक्ष निकट मानिने ग्लोबल टाइम्सले देउवाको भारत भ्रमणको विषयमा लामो समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
सो अखवारमा ‘चीन र भारतको बीचमा दोक्लाममा तनाव भइरहेको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण सुरु गरेको’ बताइएको छ ।
प्रकट भयो दोक्लामाबारे चीनको ‘शीत युद्ध’
सो पत्रिकाले सांघाई इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका निर्देशक झाओ ग्याचेङको भनाइलाई उल्लेख गरेको छ ।
उनले ग्लोवल टाइम्ससँग भनेका छन्, ‘देउवाको भ्रमणको समयमा भारतले दोक्लाम विषयमा आफ्नो पक्ष लिनका लागि दबाब दिन सक्छ तर नेपालाई भने भारत र चीन दुवै आवश्यक पर्ने भएकाले उसले शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आग्रह गर्ने छ ।’
सो पत्रिकाले नेपालले चीन र भारत विवादको बीचमा नपर्ने नीति लिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
यसले चीनले मनोवैज्ञानिक रुपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले दबाब दिएझै दोक्लाम विवादमा भारतको पक्षमा नउभिने सन्देश दिन चाहेको स्पष्टै छ ।
किनकि देउवा दिल्ली जानु केही दिन अघि चिनिया उपप्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा पनि आएका थिए । दोक्लाम विवादमा नेपालको तटस्थ नीति आफूहरुले चाहेको दोहोराएका मात्र थिएनन्, प्रशंसा पनि गरेका थिए ।
अझै अघि बढेर सो पत्रिकाले दिल्लीमा धेरै नेपालमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा बढेको र नेपाल चीनसँग निकट भएको बताउन थालेको उल्लेख गरेको छ ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने नेपाल–भारतको राम्रो सम्बन्धलाई आफूहरुले स्वागत गर्ने बताएका छन् । प्रवक्ताले भनेका छन, ‘भारतले पनि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन योगदान गर्नेछ भन्ने आश गरेका छौ ।’
बिहीबार, ८ भदौ, ०७४